के छ त त्यस्तो ११ बुँदे मा? राजा वीरेंद्र ले बहुदल माने सक्रिय राजतंत्र समाप्त हुने र भयो पनि। राजा ज्ञानेन्द्र ले गणतंत्र माने राजतन्त्र नै समाप्त हुने र भयो पनि। मधेसी मोर्चा को ११ बुँदे माने साढ़े तीन बाहुन दल नै समाप्त हुने हो त? यो खुट्टा घिसारने काम किन भइराखेको छ? मधेसी जनजाति बाहुन क्षेत्री सबै बराबर रहेको देशमा बाहुन ले चुनाव जित्न नसक्ने भनेको कि के भनेको? यति सारहो खुट्टा घिसारने काम किन? मधेसी दोस्रो दर्जाको नागरिक छ भने हाम्रो अस्तित्व छ मधेसी दोस्रो दर्जाको नागरिक छैन भने हाम्रो अस्तित्व छैन भनेको कि के भनेको बाहुन ले?